राजीनामा दिन आग्रह: के उपसभामुख शिवमायाको राजीनामा आउँला त ? | Citizen Post News
राजीनामा दिन आग्रह: के उपसभामुख शिवमायाको राजीनामा आउँला त ?
२०७६ पुस २७ गते १०:५४
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले सभामुख चयन प्रक्रिया अघि बढाउन उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई राजीनामा दिन दिएको आग्रह बेकार सावित हुने भएको छ । उपसभामुख शिवमायाले पार्टीको निर्देशन नमान्ने र आफ्नो सभामुख बन्ने सुनिश्चिता नभएसम्म राजीनामा नदिने अडान लिएकी छन् ।
संवैधानिक जटिलताका कारण सभामुख र उपसभामुख एउटै पार्टीबाट हुन नपाउने ब्यवस्था छ । सभामुखको पद सुरक्षित गर्नका लागि नेकपाले उपसभामुखलाई पदबाट राजीनामा दिन आग्रह गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार भएको सचिवालय बैठकले सभामुख पदका लागि उम्मेदवारी दिने निर्णय गर्दै उपसभामुख तुम्बाहाम्फेलाई राजीनामा दिन आग्रह गरेको थियो ।
शुक्रबार पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले उनीसँग पटक-पटक छलफल गरेर राजीनामा गर्न आग्रह गरेका थिए । तर पनि राजीनामा दिन उनले अस्वीकार गर्दै आएकी छन् ।
उनले सभामुखका लागि आफू योग्य रहेको बताउँदै निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महराले गरेको गल्तीको सजाय आफूलाई नदिन अध्यक्षद्वयलाई आग्रह गर्दै आएकी छन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार उपसभामुख पदबाट राजनीनामा गर्न उनलाई पार्टीको ह्वीप लाग्दैन् ।
उपसभामुखले पार्टीको निर्णय नमाने महाअभियोग लगाएर मात्र हटाउन सकिन्छ । सभामुख बन्ने आफ्नो सुनिश्चितता नभएसम्म राजीनामा नदिने उपसभामुखको अडानले नेकपामा हलचल मच्चिएको छ ।
पार्टी एकीकरणको हुँदाका भद्र सहमति अनुसार सभामुखको पद पूर्वमाओवादीले दावी गर्दै आएका छन् । गत असोजको दोस्रो सातादेखि सभामुख पद रिक्त रहँदै आएको छ ।